शून्य अंक ल्याएको भन्दै विद्यार्थीलाई यातना दिई कुटेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ ! | सुदुरपश्चिम खबर
शून्य अंक ल्याएको भन्दै विद्यार्थीलाई यातना दिई कुटेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ !
दाङ — विद्यार्थीलाई यातना दिएको आरोपमा शिक्षक पक्राउ परेका छन् । अभिभावकको उजुरीपछि राजपुर गाउँपालिका–७ को सिक्टा माविका शिक्षक हेमराज विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक विकले कक्षा १० का विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षामा शून्य अंक ल्याएको भन्दै हिर्काएका थिए । घाइते केही विद्यार्थीलाई उपचार नै गर्नुपरेको थियो ।
लमही–९ तेलियाकी शर्मिला कुमालले अहिले पनि औषधि सेवन गरिरहेकी छन् । ‘हामीले सुरुमा कसैलाई भन्न सकेनौं । धेरै दुखेपछि मात्रै औषधि गर्न घरमा भन्यौं,’ उनले भनिन् । शर्मिलाका बुबा परदेशी कुमालले विद्यार्थी कुट्ने शिक्षकलाई कडा कारबाहीको माग गरे ।
अर्की विद्यार्थी सोमा कुमालले भनिन्, ‘कम्मरमुनि र खुट्टामा नीलडामै छ । दुखाइ कम गर्न औषधि नै खानुप¥यो ।’ छोरी कुटिएको सुनेपछि बाबु नरेश कुमालले विद्यालय र जनप्रतिनिधिलाई गुनासो गरे तर तत्कालै केही सुनुवाइ भएन । एक विद्यार्थीले शिक्षकले कुट्दै गरेको भिडियो लुकेर खिचेका थिए । भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिएपछि घटनाबारे हल्लीखल्ली भएको थियो । अन्ततः अभिभावकले शिक्षक विकविरुद्ध इप्रका गढवामा उजुरी दिए ।
विद्यार्थीले पढाइमा लापरबाही गरेकाले सुधार्न सामान्य दण्ड दिएर सचेत पार्न खोजेको शिक्षक विकले दाबी गरेका छन् । उनलाई मंगलबार बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको दाङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मुकुन्दप्रसाद रिजालले बताए ।
(दुर्गालाल केसीले ekantipur.com मा लेखेका छन्।)
नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु हुने : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ !